စားသုံးသူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေသည့် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရ?? - Yangon Media Group
စားသုံးသူ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေသည့် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများကို ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးနည်းဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသာဦးကပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ် မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်တွင် အောင်မြေသာစံ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာလှမိုးက ဆက်သွယ်ရေးသုံးစွဲနေသူများအပေါ် စားသုံးသူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေသော ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင် (Service Provider)ရရှိထားသည့် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအား ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သော ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ရသော်လည်းကောင်း၊ စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရသော်လည်း ကောင်း ကြပ်မတ်စစ်ဆေး အရေး ယူဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းမှုကို ယင်းသို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးသာဦးက ”ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ် ငန်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Service Provider တွေမမှန်မကန်လုပ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့က တရားစွဲလို့ရတဲ့ အခြေအနေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၆၆ (ဃ)နဲ့ဆိုရင် တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုအသုံးချပြီးပြန် လုပ်ရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်။ တချို့ ကြော်ငြာတာတစ်မျိုး တကယ်လုပ်တာတစ်မျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အ နေနဲ့ အရေးယူတာတွေ ဒဏ်ရိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမှာ အဓိကအား ဖြင့် အရေးယူနိုင်တာ သုံးရပ်ပဲရှိပါတယ်။ သတိပေးမယ်။ သတ် မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလအထိ လိုင်စင်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်းမယ်။ လိုင်စင်အပြီး ပိတ်သိမ်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုင်စင်ကိုခဏပိတ်တာနဲ့ အပြီးပိတ်သိမ်းတာက ဥပဒေမှာပါပေမယ့် တကယ်လုပ်လို့မရဘူး။ သူတို့ကို တစ်နာရီလေး ပိတ်လို့မရဘူး။ပိတ်လိုက်တာနဲ့ သုံးစွဲသူအားလုံး က ထိခိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီဥပဒေကို ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့၊ နည်းဥပဒေမှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိစားသုံးသူ အခွင့်အ ရေး ချိုးဖောက်နေသည့်ဆက်သွယ် ရေး အော်ပရေတာများကို ဒဏ် ရိုက်မှုဖြင့်သာ အရေးယူလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အမှန်တ ကယ်စားသုံးသူ အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်ခံရပါက ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြား နိုင်ပြီး၊ ယင်းတိုင်ကြားမှုများဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဦးသာဦးက ”တချို့ကိစ္စတွေမှာ မှားယွင်းဖြတ်တောက်တာတွေ စက်ကြောင့်ပဲမှားမှား ဘာကြောင့် ပဲမှားမှား ခံရတာကပြည်သူလူထုပါ။ ပြန်လျော်ခဲ့ရဖူးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေ ကျွန်တော် တို့ မသိနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါ တယ်။ သုံးစွဲသူတွေကသူတို့ကို complain လုပ်တာက လုပ်ပါ။ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနကိုလည်း တိုင်ကြားပေးပါ။ ဒီ လိုတိုင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန် တော်တို့တောက်လျှောက်အရေး ယူပါ့မယ်။ နည်းဥပဒေမှာ သူတို့ ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဝင်ငွေရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိကို ဒဏ်ရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လိုင်စင်မှာလည်း အဲဒီလိုပါတဲ့အတွက် ဒဏ်ရိုက်ပါ တယ်”ဟုပြောသည်။
ယင်းမေးမြန်းဖြေကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက မလျော်မကန်ဖြတ်တောက်မှုများဟာ ဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုတာ ပေါ် ပေါက်နေကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဖိဖိစီးစီးအရေးယူဆောင်ရွက်မည့်အပိုင်းကို အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပြီးအများအတွက် အကျိုးရှိ စသည့်မေးခွန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မေး ခွန်းနှင့်ဖြေကြားချက်များကို နိုင်ငံ တော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြ ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း လွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အောင်မြေသာစံပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာလှမိုးက ”တစ်နိုင်ငံလုံးကအင် တာနက်ဝန်ဆောင်မှု၊ ဖုန်းဝန် ဆောင်မှု သုံးနေတဲ့သူတွေက မ လျော်မကန် ဖြတ်တောက်ခြင်းခံနေရတယ်။ ဖြတ်တိုင်း complain တက်တုန်း complain တက်တိုင်း မှားတယ်ဆိုပြီးမှ ပြန်ပေးရင် ဒါ စနစ်တကျဖြတ်တောက်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ လက်ပူးလက် ကြပ်မိမှ ပြန်ပေးတာဟာ ခိုးတာက ခိုးတာပါပဲ။ ဒီကြိုတင်ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ မသိဘဲ ဖြတ် တောက်ခြင်းဟာ အလွဲသုံးစားမှု မြောက်ပါတယ်။ နစ်နာသူကိုယ်စား ဝန်ကြီးဌာနကမည်သို့ တရား စွဲ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာရယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ငွေတွေကို ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသိရှိလိုပါတယ်”ဟု မေး မြန်းခဲ့သည်။
ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ပါတီသစ်ထူထောင်ခြင်းကြောင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး မပြိုဟုဆို
ဆော်ဒီ တော်ဝင်နန်းတော် အရှေ့တွင် သေနတ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား လုံခြုံရေးနှစ်ဦးသေဆုံး၊ သုံးဦး ?
”ဇာတ်ကား တစ်ကားကို သေချာတိုင်ပင်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ကြမယ့် မည်သူနဲ့မဆို ကျွန်မတွဲပြီး အတူတူ အ
ဝေဖန်မှုများကြောင့် မန်ယူမှ ထွက်ခွာရန် ဆန်းချက်ဇ် ပြင်ဆင်နေ၊ မန်ယူ၏ စာချုပ်သစ်အတွက် ကမ်းလှ??